Hospitality & Tourism | BCAL
စက်မှုလုပ်ငန်းတွင် လုပ်ကိုင်နေစဉ် သင့်အား အမှန်တကယ် အနားပေးနိုင်ရန် ကျွန်ုပ်တို့တွင် ဧည့်ဝတ်ပြုမှုနှင့် ခရီးသွားသင်တန်းများ အများအပြားရှိသည်။
ဘေးကင်းသောအစားအစာကိုင်တွယ်ခြင်းနှင့် အရက်၏တာဝန်ရှိမှုဝန်ဆောင်မှု၊ သို့မဟုတ် ဧည့်ဝတ်ကျေပွန်ရေးနှင့် ခရီးသွားလာရေးဆိုင်ရာ Certificate II အပြည့်အစုံကဲ့သို့သော မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည့် ရက်တိုသင်တန်းများမှ ရွေးချယ်ပါ။
အသိအမှတ်ပြုယူနစ်- SITHFAB002 သည် တာဝန်သိသိဖြင့် အရက်ကို ဝန်ဆောင်မှုပေးသည်။
အတည်ပြုထားသော Responsible Service of Alcohol (RSA) ပရိုဂရမ်ကို ပြီးမြောက်ခြင်းဖြင့် သင်တန်းသားများသည် လိုင်စင်ရ အဆောက်အအုံများတွင် ဘေးကင်းပြီး ပျော်ရွှင်ဖွယ်ကောင်းသော ပတ်ဝန်းကျင်ကို အထောက်အကူဖြစ်စေရန်အတွက် ကျွမ်းကျင်မှုနှင့် အသိပညာများကို ပေးပါသည်။
Tutor: Gary Hart | ကုန်ကျစရိတ်- ၉၅ ဒေါ်လာ (သက်သာခွင့် ၈၅ ဒေါ်လာ)
ကြာသပတေး၊ အောက်တိုဘာလ ၂၉ ရက်၊ နံနက် ၉ နာရီမှ နေ့လည် ၁ နာရီ
သောကြာ၊ ဒီဇင်ဘာ ၄၊ နံနက် ၉ နာရီမှ နေ့လည် ၁ နာရီ
ကျူရှင်ဆရာ- ဂယ်ရီဟတ် | ကုန်ကျစရိတ်- ၉၅ ဒေါ်လာ
(၈၅ ဒေါ်လာ သက်သာခွင့်)
အစားအသောက် ဘေးကင်းရေး အဆင့် 1 (အစားအစာ ကိုင်တွယ်ခြင်း)
အသိအမှတ်ပြုယူနစ်- SITXFSA001 အစားအသောက်ဘေးကင်းလုံခြုံရေးအတွက် တစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းမှုအလေ့အကျင့်များကို အသုံးပြုပါ။
အများသူငှာစားသုံးရန် အစားအစာများကို ကိုင်တွယ်သူတိုင်းအတွက် အသိအမှတ်ပြုထားသော ယူနစ်—ကဖေးများ၊ ကလပ်များ၊ ကျောင်းကန်တင်းများ၊ နို့အရက်ဆိုင်များ။ လက်တွေ့လေ့ကျင့်ခန်းများ ပါဝင်သည်။ နေ့လည်စာ ပါဝင်ပါသည်။
ကြာသပတေး၊ စက်တင်ဘာ ၃၊ နံနက် ၁၀ နာရီမှ ညနေ ၄ နာရီ
ကျူရှင်ဆရာ- ဂယ်ရီဟတ် | ကုန်ကျစရိတ်- $120
(ဒေါ်လာ ၁၁၀ သက်သာခွင့်)
ကြာသပတေး၊ ဒီဇင်ဘာ ၃၊ နံနက် ၁၀ နာရီမှ ညနေ ၄ နာရီ
ဧည့်ဝတ်ပြုခြင်းလုပ်ငန်းတွင် သင်လုပ်ဆောင်ရန်လိုအပ်သည့် ကျွမ်းကျင်မှုများဖြင့် ခရီးသွားရာသီအတွက် အဆင်သင့်ဖြစ်နေပါစေ။
ဤ5ရက်အထူးသင်တန်းသည် သင့်အား ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။
· Barista ကျွမ်းကျင်မှု
· ရှေးဦးသူနာပြု အဆင့် ၂
တစ်ဦးချင်းသင်တန်းများတွင် 20% ကျော် သက်သာသည်။
နိုဝင်ဘာ ၃၀ မှ ဒီဇင်ဘာ ၄ | ကုန်ကျစရိတ်- $360
ကြာသပတေးနေ့၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၇ ရက် ၊
ညနေ ၆ နာရီမှ ၉း၄၅ နာရီ
မတ်လ ၃၁ ရက်၊
ကျူရှင်ဆရာ- ဖရန့် ဖာဇီယို
ကုန်ကျစရိတ်- $95 ($85 conc.)
အစားအစာ ဘေးကင်းရေး အဆင့် 1 (အစားအစာ ကိုင်တွယ်ခြင်း)
သောကြာ၊ မတ်လ ၁၁ ရက်၊ နံနက် ၁၀ နာရီမှ ညနေ ၄ နာရီ
ကျူရှင်ဆရာ- Melissa Harrison
ကုန်ကျစရိတ်- $120 ($110 conc.)
တက်သစ်စ Barista များအတွက် ကောင်းမွန်သော အစမှတ်တစ်ခု။ full-size လုပ်ငန်းသုံးစက်ကို အသုံးပြု၍ လုပ်နည်းကို သင်လေ့လာနိုင်ပါမည်-
ကောင်းမွန်တဲ့ Espresso ကို တစိုက်မတ်မတ် ထုတ်ယူပါ။
ကော်ဖီကြိတ်စက်များကို မှန်ကန်စွာ ချိန်ညှိပါ။
ဖေဖော်ဝါရီ ၂၅ ရက် သောကြာနေ့
မနက် ၉း၃၀ မှ ၂း၃၀ ထိ
အစိုးရစည်းမျဉ်းများသည် ကျောင်းသားအားလုံးကို COVID-19 ကာကွယ်ဆေး အပြည့်အဝထိုးထားရန် သို့မဟုတ် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ကင်းလွတ်ခွင့်ရှိရန် လိုအပ်နေပြီဖြစ်သည်။ Booking မလုပ်ခင် ဒါကိုစဉ်းစားပါ။